Aragannoo Holqa Haaraa Naasi’ool – Fana Broadcasting Corporate
Finfinnee, Onkololeessa 28, 2012 (FBC) – Holqi Naasi’ool Godina Harargee Bahaa aanaa Malkaa Balloo Ganda Tokkummaa Bilisummaatti argama.
Bakki seenaa qabeessi kun magaalaa Gudditti Biyyoolessaa Finfinnee irraa KM 555, magaala Godina Harargee Bahaa irraa KM 193, aanaa Jaajaa irraa KM 30 akkasumas bakka ganda Tokkummaa Bilisummaa irraa immoo KM 5 fagaata.
Qorannoo Biiroo Aadaa fi Turizimii Oromiyaa gaggeesseen holqa haarawaa maqaa ogeessa qorataa holqaa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa tin Holqa Naasi’ool jedhamun moggaafame.
Maqaan Naasi’ool jedhamu kan irraa moggaaffamee jecha ” naasi” fi’’ ool” jedhu irra kan moggaaffameedha.
”Naasi” jechuun hikkaan isaa maqaa qorataa holqa Biiroo Aadaa fi Tuurizimii Oromiyaa Naasir jedhamu irraa kan dhufe yoo ta’u, “ ool ” jechuun ammoo hiikaan isaa gubbaa jechuudha.
Holqi kun balbala seensa xiqqoo irraa hanga guddootti balbala 59 qabaachu isaa ragaan suuraa wajjin mirkanaa’ee jira.
Haa ta’u malee, qorannoon holqa kanaa waan hin xumuuraminiif jecha qorannoo marsaa lammaffaa holqichaa kan itti fufu ta’a jedhameera.
Keessi holqa kanaa akka qorannoon ammaa ibsuutti kiiloo meetra tokko fagaatee argama.
Lafa irraa olka’insi holqa kanaa saantimeetira 30 hanga meetiira 38.2 ol fagaatee mul’ata.
Bal’innii keessi holqa kanaa saantimeetira 60 hanga meetira 100.3 qabaa.
Haallii qilleensaa (Oksijiinii) holqa kana keessa jiru dhibbeentaa 19.6 waan ta’eef, haala qilleensaatin midhaan lubbuu nama irra geessisu tokko hin jiru.
Akka qorattoonni holqaa biyya keenyaa fi biyya alaa mirkaneessanitti holqi Naasi’ool kun yoo haalli mijaawaan jiraate kan akka daandii Bonaa Gannaa, bishaan dhugaati, ibsaa, geejjiiba, iddoo ciisiichaa fi nyaataa (hooteeloota) fi kkf yoo jiraate holqa, bosona fi bineensoota bosona kan akka gadamsa, boroofaa fi shimbbirroota gosa adda addaa daawwachuuf tuuristoota baay’ee harkisuu danda’aa jedhameera.
Maddi:- Biiroo Aadaafi Tuurizimii Oromiyaa